Madaxwayne Cusub oo la doortay dalka Faransiiska – Radio Daljir
Madaxwayne Cusub oo la doortay dalka Faransiiska
Paris, May 07 -Ninka Faransiiska Shuuciga ah ee Francois Hollande ayaa weli u dabaaldegaya guushii uu ka gaadhay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi.
Mr Hollande ayaa helay wax ka yar 52% codadkii la dhiibtay axaddii shalaytoole ee doorashadii ku celiska ahayd ee dalkaasi Faransiiska ,waxana mar uu hadlay uu sheegay in uu ku han weyn yahay in uu raja gelin doono dadka wadankiisa.
Madaxweynaha xafiiska ka degaya ee midig-dhexe ee Nicolas Sarkozy ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyey ee Faransiis ah ee aan ku guuleysan xilli labaad ee madaxtinimo tan iyo wixii ka dameeyey sanadkii 1981.
Isagoo qiranayey guuldarro ayuu Mr sarkozy u hanbalyeeyey ninkii ka guuleystay ee Mr Hollande ,waxana uu u rajeeyey nasiib wanaagsan.
Mr Hollande ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono sidii uu gorgortan uga geli lahaa deynta dowladda ee aagga seylada dalalka Eurozone.
Kumanaan qof oo aad u faraxsan ayaa isugu soo baxay fagaaraha de la Bastille ee magaalada Paris oo ah meesha xudunta u ah qolyaha garabka bidix.
Francois Hollande ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey ee hanta-wadaag ah ee ku guuleysta madaxtinimada dalka faransiiska tan iyo madaxweynihii Francois Mitterrand ee sideetamaadkii.
Mr. Hollande ayaa hadal ka jeediyey magaalada uu ku xooganyahay ee Tulle ee badhtamaha dalkaasi faransiiska.
Hadalkiisa ayuu ku sheegay in uu diiradda saarayo sidii siyaasadda Maaliyadda ee midowga Europe looga weecinlahaa gunti-giijis, iyadoo muhiimadda la siinayo koboca dhaqaalaha.
“Europe innaga ayey ina eegayaan ,gunti-giijisku ma noqonayo khayaarka ama dookha keliya ee jira, annigu waxaan ahay madaxweynaha dhalinyarada reer Furnace, idinku waxaad tihiin dhaqdhaqaaqa ka kacaya ee ka toosaya qaaradani Europe? sidaasi ayuu Mr Hollande ka sheegay magaalada Tulle, ka hor inta aanu madaarka Brivo ee magaaladaasi ka dhoofin , isagoo u kicitimay magaalada caasimada ah ee Paris ,waxana markaasi uu taageerayaashiisa kula hadlaya fagaaraha hanta-wadaagu caanka ku yihiin ee de la Bastille.
Shaqa la?aanta kor u kacaysa ee dalkaasi Faransiiska iyo dhibaatada dhinaca maaliyadda ayaa raad weyn ku lahayd guusha murashaxa shuuciga ahe ee Francois Hollande.
Wareegii kowaad ee doorashada madaxtinimada Faransiiska ayaa murashaxa shuuciga ah ee Francois Hollande ku guuleystay 28.6% halka madaxweynaha talada ka degaya ee Nicolas Sarkozy uu helay 26.2%.
Nicolas Sarkozy ayaa sanadkii 2007dii loo doortay madaxtinimada dalkaasi Faransiiska,waxana dadka naqdiya ay sheegaan in uu ku guuldaraystay hagaajinta dhaqaalaha dalkaasi.
Francois Hollande ayaa dhawr jeer oo hore isu soo taagay madaxtinimada dalkaasi faransiiska, iyadoo guusha doorashadiisana loo aaneeyey durufaha ka jira dalkaasi Faransiiska , iyo hogaamiyaha la tartamayey oo aan la jeclayn.
Hogaamiyayaal caalami ah oo uu ka mid yihiin reysalwasaaraha Britain David Cameroon iyo hogaamiyaha Germany haweeneyda Merkel ayaa u hanbalyeeyey Francois Hollande guusha uu ka gaadhay doorashadii dalkaasi Faransiiska.